လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အောင်မြင်မှုအတွက် အရေးပါသည့် အလုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဓိပ္ပါယ် – Gentleman Magazine
ရှေးဟောင်း ဂရိဒဏ္ဍာရီထဲက စီစီဖတ်စ် ဆိုသူဟာ အိုလံပတ်စ် နတ်ပြည်က နတ်ဘုရားတွေကို စိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်ပြီး ရှုံးနိမ့်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက် သူဟာ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ သူရရှိတဲ့ ပြစ်ဒဏ်က ဘာဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ? ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ သေဒဏ်၊ ထောင်ဒဏ် ဘာတစ်ခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ နတ်ဘုရားတို့ရဲ့ အရှင်သခင် ဇုစ် နတ်မင်းကြီးက ဆန်းဆန်းပြားပြားပြစ်ဒဏ်တစ်ခုအနေနဲ့ ကြီးမားလေးလံတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးတစ်ခုကို တောင်ထိပ်တစ်ခုပေါ်တွန်းတင်ခိုင်းပါတယ်။ ကျောက်တုံးကြီး ပြန်လိမ့်ကျသွားရင် နောက်တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက် အဆုံးမရှိ ပြန်တွန်းတင်ခိုင်းထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စီစီဖတ်စ် ရရှိတဲ့ပြစ်ဒဏ်ဟာ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာအဓိပ္ပါယ်မှမခံစားရပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်နေရသူတွေနဲ့ အတူတူပါပဲ။
၂၀ ရာစုနှစ်မှာလည်း စီစီဖတ်စ် ဒဏ္ဍာရီလိုမျိုးပြစ်ဒဏ်ကို တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ရော်ဘန်ကျွန်းပေါ်က အကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှာ ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကျဉ်းထောင်ဟာ နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား (၁၆)နှစ်ကြာ အကျဉ်းကျခဲ့တဲ့ ထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကျဉ်းထောင်မှာဆိုရင် အကျဉ်းသားတွေဟာ ထုံးကျောက်မိုင်းတွင်းတစ်ခုကို နေ့စဉ်သွားရောက်ပြီး ကျောက်တုံးပမာဏတစ်ခုကို တူးဖော်ကြရပါတယ်။ ဒီလို တူးဖော်မှုကို သီတင်းတစ်ပတ်ကြာလုပ်ဆောင်ပြီး နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ တူးဖော်ထားတဲ့ပမာဏအတိုင်း ကျောက်မိုင်းတွင်းထဲကို သွားပြန်ထည့်ခိုင်းခံကြရပါတယ်။ အကျဉ်းသားတိုင်း ရူးချင်စိတ်ပေါက်သွားစေတဲ့ ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အများစုအတွက် ကံကောင်းတာက အခုလို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ မရှိပေမယ့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပျောက်ဆုံးပြီး အလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့အတွက် ဂရိဒဏ္ဍာရီထဲက စီစီဖတ်ဒ်နဲ့တော့ သိပ်မကွာလှပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ အောင်မြင်မှုနဲ့ အလုပ်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို အတိအကျသိရှိထားမှ အဆင်ပြေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနေကြရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘ၀ကို ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ အဓိကမောင်းနှင်အားက သာယာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာထက် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံမှုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဘ၀ရဲ့ အချိန်တော်တော်များများကို အလုပ်အတွက် ပေးဆပ်ထားကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်က လိပ်စာကဒ်ပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ရာထူးတာဝန်လောက်ပဲ မဖြစ်သင့်သလို ရာထူးနောက်တဆင့်တိုးတက်ဖို့ပဲလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်သလဲ၊ ဘယ်လောက်မြန်မြန်လုပ်ဆောင်သလဲဆိုတာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့် လုပ်ဆောင်တာလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတာကိုမှ ရည်ရွယ်ချက်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကို တွေ့ရှိပြီဆိုရင်တော့ သင်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုတွေ့ရှိပြီး တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုပါ ပူးတွဲခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပျငနျးခှငျအတှငျး အောငျမွငျမှုအတှကျ အရေးပါသညျ့ အလုပျရဲ့ရညျရှယျခကျြအဓိပ်ပါယျ
ရှေးဟောငျး ဂရိဒဏ်ဍာရီထဲက စီစီဖတျဈ ဆိုသူဟာ အိုလံပတျဈ နတျပွညျက နတျဘုရားတှကေို စိနျချေါတိုကျခိုကျပွီး ရှုံးနိမျ့ခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့အတှကျ သူဟာ ပွဈဒဏျပေးခွငျးခံခဲ့ရပါတယျ။ သူရရှိတဲ့ ပွဈဒဏျက ဘာဖွဈမယျလို့ ထငျပါသလဲ? ညှငျးပနျးနှိပျစကျမှု၊ သဒေဏျ၊ ထောငျဒဏျ ဘာတဈခုမှ မဟုတျပါဘူး။ နတျဘုရားတို့ရဲ့ အရှငျသခငျ ဇုဈ နတျမငျးကွီးက ဆနျးဆနျးပွားပွားပွဈဒဏျတဈခုအနနေဲ့ ကွီးမားလေးလံတဲ့ ကြောကျတုံးကွီးတဈခုကို တောငျထိပျတဈခုပျေါတှနျးတငျခိုငျးပါတယျ။ ကြောကျတုံးကွီး ပွနျလိမျ့ကသြှားရငျ နောကျတဈခေါကျပွီးတဈခေါကျ အဆုံးမရှိ ပွနျတှနျးတငျခိုငျးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ စီစီဖတျဈ ရရှိတဲ့ပွဈဒဏျဟာ ကိုယျလုပျနတေဲ့အလုပျနဲ့ပတျသကျပွီး ဘာအဓိပ်ပါယျမှမခံစားရပဲ ထပျခါတလဲလဲ လုပျနရေသူတှနေဲ့ အတူတူပါပဲ။
၂၀ ရာစုနှဈမှာလညျး စီစီဖတျဈ ဒဏ်ဍာရီလိုမြိုးပွဈဒဏျကို တောငျအာဖရိကနိုငျငံ ရျောဘနျကြှနျးပျေါက အကဉျြးထောငျတဈခုမှာ ကငျြ့သုံးခဲ့ပါတယျ။ ဒီအကဉျြးထောငျဟာ နယျလျဆငျမနျဒဲလား (၁၆)နှဈကွာ အကဉျြးကခြဲ့တဲ့ ထောငျဖွဈပါတယျ။ ဒီအကဉျြးထောငျမှာဆိုရငျ အကဉျြးသားတှဟော ထုံးကြောကျမိုငျးတှငျးတဈခုကို နစေ့ဉျသှားရောကျပွီး ကြောကျတုံးပမာဏတဈခုကို တူးဖျောကွရပါတယျ။ ဒီလို တူးဖျောမှုကို သီတငျးတဈပတျကွာလုပျဆောငျပွီး နောကျတဈပတျမှာတော့ တူးဖျောထားတဲ့ပမာဏအတိုငျး ကြောကျမိုငျးတှငျးထဲကို သှားပွနျထညျ့ခိုငျးခံကွရပါတယျ။ အကဉျြးသားတိုငျး ရူးခငျြစိတျပေါကျသှားစတေဲ့ ပွဈဒဏျတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့အမြားစုအတှကျ ကံကောငျးတာက အခုလို ညှငျးပနျးနှိပျစကျမှုတှေ မရှိပမေယျ့ လုပျငနျးခှငျထဲမှာ ရညျရှယျခကျြနဲ့ အဓိပ်ပါယျပြောကျဆုံးပွီး အလုပျတှလေုပျနရေတဲ့အတှကျ ဂရိဒဏ်ဍာရီထဲက စီစီဖတျဒျနဲ့တော့ သိပျမကှာလှပါဘူး။ လုပျငနျးခှငျတဈခုမှာ အောငျမွငျမှုနဲ့ အလုပျရဲ့အဓိပ်ပါယျကို အတိအကသြိရှိထားမှ အဆငျပွနေိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အားလုံးဟာ ကိုယျ့ဘဝရဲ့ရညျရှယျခကျြကို ကိုယျတိုငျရှာဖှနေကွေရသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဘဝကို ရှဆေ့ကျနိုငျဖို့ အဓိကမောငျးနှငျအားက သာယာပြျောရှငျမှုဆိုတာထကျ အဓိပ်ပါယျပွညျ့စုံမှုလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ဘဝရဲ့ အခြိနျတျောတျောမြားမြားကို အလုပျအတှကျ ပေးဆပျထားကွရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အလုပျလုပျရခွငျး ရညျရှယျခကျြက လိပျစာကဒျပျေါမှာ ဖျောပွထားတဲ့ရာထူးတာဝနျလောကျပဲ မဖွဈသငျ့သလို ရာထူးနောကျတဆငျ့တိုးတကျဖို့ပဲလညျး မဖွဈသငျ့ပါဘူး။ ရညျရှယျခကျြဆိုတာက ကြှနျတျောတို့ ဘာလုပျသလဲ၊ ဘယျလောကျမွနျမွနျလုပျဆောငျသလဲဆိုတာတှေ မဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ ဘာကွောငျ့ လုပျဆောငျတာလဲ၊ ဘယျလိုလုပျတာလဲဆိုတာကိုမှ ရညျရှယျခကျြလို့ ချေါပါတယျ။ ဒီရညျရှယျခကျြကို တှရှေိ့ပွီဆိုရငျတော့ သငျလုပျနတေဲ့ အလုပျရဲ့ အဓိပ်ပါယျကိုတှရှေိ့ပွီး တိုးတကျအောငျမွငျမှုတှကေိုပါ ပူးတှဲခံစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous: နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးသားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၅)ခု
Next: သားသမီးတွေ မျိုးဆက်သစ်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့ ရှောင်ရန်(၆)ခု